Super Perro Mike Apk Dhawunirodha Android [Dzazvino] | APKOLL
Super Perro Mike Apk Dhawunirodha Android [Dzazvino]
October 9, 2021 by Reyan Ahmad
Kubhejera ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekudzora kushushikana uye kunakirwa nenguva yako yemahara. Nekudaro, isu tadzoka nechimwe chikumbiro chinoshamisa chenyu mese, icho chamunogona kutamba zviri nyore uye kunakirwa. Super Perro Mike Apk ndeimwe yemapuratifomu emitambo ichangoburwa ayo anopa akareruka, asi ekurwisa mutambo.
Kune matani emitambo inowanikwa pa internet, ayo vashandisi vanogona kutamba pane akasiyana madhivhisi. Kune akawanda madhizaini, aunogona kushandisa semitambo michina. Asi zvishandiso zveApple zvinozivikanwa mumusika, iyo ine vashandisi vazhinji pasi rese.
Chii chinonzi Super Perro Mike Apk?
Super Perro Mike Apk ndeye Android yakasununguka mutambo, iyo inopa yakapusa uye yakapusa Gameplay kune vashandisi. Iwe unofanirwa kutungamira iyo Mike iri pamusoro pemepu uchishandisa zvinodzora uye dzivisa kurohwa nevavengi. Tanga kutamba pano uye unakirwe zvakanyanya.
Kune matani emitambo aripo pa internet, ayo aunogona kutamba. Asi zvizhinji zviripo zvaida hunyanzvi hwekutamba. Naizvozvo, vanhu havadi kutamba mitambo yemakwikwi yakadaro. Naizvozvo, isu tiri pano neichi chinoshamisa 2D Mutambo zvenyu mose.
Na Super PeeroMike, haufanire kuve nechero mhando yehunyanzvi hwemitambo. Kana iwe uchida kunakidzwa nemabhureki ako mapfupi, saka pano iwe unogona kuve nawo ese. Iyo chikuva inopa akawanda masevhisi, ayo iwe aunogona kuwana nyore pano uye unakirwe.
Mutambo unopa mahara-ekutamba masevhisi, asi parizvino, iyo yepasi rose vhezheni haisi kuwanikwa pa internet. Asi iwe unogona kuwana yekutanga kuwana pano uye unakirwe. Pane zvakawanda maficha zviripo zvevatambi, izvo zvaunogona kuongorora pano uye kunakidzwa.
Haufanire kupfuura chero mhando yekunyoresa maitiro. Saka, tanga kutamba pano pasina chero rudzi rwekurambidzwa uye unakirwe munguva yako yemahara. Iyo Gameplay iri nyore uye yakapusa kune vashandisi, mauri iwe yaunofanirwa kudzora Mike.
Kune nyika nhatu dzakasiyana dziripo, maunogona kutamba. Mune imwe neimwe yenyika, iwe uchasangana nevavengi vakasiyana, avo vanoda kukuuraya. Nekudaro, iwe unofanirwa kuramba uchikwira uye kudzivirira kusangana nevavengi.
Iwe zvakare uchawana imwe sarudzo, kuburikidza iyo iwe yaunogona kuvauraya nyore. Shandisa ngoda kurova vavengi, kuburikidza iyo yaunogona kuvauraya nyore. Saka, iwe unogona zvakare kupokana pavari, asi iwe unofanirwa kupfura kubva kurudyi nzira.
Iwo maitirwo ane hukama nechokushandisa chako, icho chaunogona kukombamira kuenda kuruboshwe uye kurudyi. Iwe unowana matanho akasiyana, pane aunofanirwa kusvetuka nekusvika pane inotevera. Asi kana iwe ukarasikirwa nhanho, ipapo iwe unozodonha uye ndokurasa mutambo.
Saka, chengeta iyo mike mukutonga uye uteedzere nhanho. Mifananidzo yacho yakanaka chaizvo, iyo inokupa iwe ruzivo rwekutamba. Iyo chikuva inopawo vatungamiriri bhodhi, kwaunogona kuwana akawanda evatambi vese pasirese.
Nekudaro, iwe unogona kukwidza kumusoro kuti uwane chinzvimbo chiri nani pane bhodhi remutungamiriri. Kune matani ezvimiro anowanikwa kune vatambi, ayo aunogona kuongorora. Saka, kana iwe uchida kuwana mukana kune ese masevhisi, saka Super Perro Mike Game Dhawunirodha pane yako Android chishandiso.
Tine mimwe mitambo yemitambo iripo, iyo iwe yaunogona zvakare kutamba uye kufara nayo. Saka, kana iwe uchida kuwana mamwe akafanana maapp, ipapo imi varume munofanira kuedza Pop Pop Marine Apk uye Squid Mutambo Apk. Ose ari maviri mitambo yakakurumbira.
zita Super Perro Mike
zera 43.90 MB
mhando v0.92.00 (10024)
Package Zita com.veketor.superMike
chikamu Games/shaya hanya
Rutsigiro Rushoma Runodiwa 5.0 uye Pamusoro
Maitiro EkuDhawunirodha Super PerroMike Android?
PaGoogle Store, iyo app inopa kuwana kwekutanga, iko kunopihwa vashoma vashandisi. Saka, iwe unogona kuyedza kutora iyo Apk faira, asi pane mukana wekuti iwe usatore mutambo. Asi usazvidya moyo nezvazvo nekuti takawana mhinduro yakanakisa yenyu mese.
Imi vakomana munogona kurodha pasi nyore iyo apk faira kubva papeji rino. Iwe unongoda chete kuwana bhatani rekuburitsa, iro rinowanikwa kumusoro uye pasi peji rino. Kamwe iwe wawana bhatani, wobva wagadzira imwechete pombi pairi uye mirira mashoma masekondi.
Mahara kurodha pasi nekutamba
Akanakisa Casual Game
Nyore uye Nyore Gameplay
Inowanikwa iri User-ushamwari
Tsigira Chete Spanish Mutauro
Haitsigire Yechitatu-bato Ads
Super Perro Mike Apk inopa zvimwe zveakanakisa maficha evashandisi, ayo aunogona kuwana pano uye unakirwe. Saka, tora iyo apk faira kubva kurodha pasi rekuburitsa pazasi uye unakirwe yako yemahara nguva uchitamba uyu unoshamisa mutambo.
Categories shaya hanya, Games Tags 2D Mutambo, Super Perro Mike Apk, Super Perro Mike Game Download, Super PerroMike Post navigation
Macro Space v2 Apk Dhawunirodha Kune Android [FF Hack]
Kurota Live Apk Dhawunirodha Android [Dzazvino]
© 2021 APKOll.com - Yese Mitezo Yakachengetedzwa